Umgaqo-nkqubo wabucala-Iindaba zeSikolo sangoku: Iindaba zeSikolo sangoku
Apha ku-https: //www.currentschoolnews.com, imfihlo yabakhenkethi bethu ibaluleke kakhulu kuthi. Olu xwebhu lomgaqo-nkqubo wabucala lubonisa iintlobo zolwazi lomntu olufunyenweyo kwaye luqokelelwe ngu-https: //www.currentschoolnews.com kunye nendlela esetyenziswa ngayo.
Njengezinye iiWebhusayithi ezininzi, iNews.School.ng isebenzisa iifayile zelog. Ulwazi ngaphakathi kweefayile zelog lubandakanya iidilesi zomgaqo-nkqubo we-intanethi (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), isitampu somhla / ixesha, ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, kunye nenani lokucofa ukuhlalutya imeko, ukulawula indawo, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ujikeleze indawo, kwaye uqokelele ulwazi lwedemokhrasi. Iidilesi ze-IP, kunye nolunye ulwazi olunxibelelene nalo naluphi na ulwazi oluchongiweyo.
UGoogle, njengomthengisi wesithathu, usebenzisa ikuki ukuhambisa iintengiso kwiNews.School.ng.
Ukusetyenziswa kweGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba isebenze kwiintengiso kubasebenzisi ngokusekwe kutyelelo lwabo kwiNews.School.ng nakwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi.
Abasebenzisi banokukhetha ukusebenzisa iicookie ze-DART ngokundwendwela intengiso kaGoogle kunye nomgaqo-nkqubo wabucala wenethiwekhi kule URL ilandelayo- http://www.google.com/privacy_ads.html.
Kuya kufuneka ubonisane nemigaqo-nkqubo yabucala yeeseva zentengiso zomntu wesithathu ngolwazi oluthe kratya malunga nokusebenza kwabo kunye nemiyalelo malunga nokuba ungazikhetha njani iinkqubo ezithile. Umgaqo-nkqubo wabucala we-https: //www.currentschoolnews.com awusebenzi, kwaye asikwazi ukulawula imisebenzi, yabanye abathengisi okanye iiwebhusayithi.
Ukuba unqwenela ukukhubaza ii-cookies, unokwenza njalo ngokukhetha isikhangeli sakho. Ulwazi oluthe kratya malunga nolawulo lwecookie kunye neebrawuza ezithile zewebhu zinokufumaneka kwiwebhusayithi ezichaphazelekayo.